Anne Perry: Kubva pamhosva yemhondi kuenda kumunyori wemhosva. | Zvazvino Zvinyorwa
Anne Perry: Kubva pamhosva yemhondi kuenda kumunyori wemhosva.
Anne Perry akapedza makore mashanu ari mutirongo akatongerwa kuuraya kwoutsinye amai vaPauline.
Juliet Marion Hulme (London, 1938) izita chairo raAnn Perry, imwe yeiyo inonyanya kuverengerwa vanyori vekunyengera yenyika yeAnglo-Saxon. Yake inonyanya kufarirwa nematikitivha pakati pevaverengi pane yakaiswa munguva dzeVictorian uye nyeredzi mupurisa Thomas pitt. Pitt akaroora Charlotte, mukadzi wepamusoro-soro mukirasi anoshanda pamwe mukugadzirisa nyaya dzake achiratidza hunyanzvi hunoshamisa, uyo anoshandisa vekutaurirana nemhuri yake kugadzirisa nyaya dzinokombamira murume wake. Mutsara wechipirie yakaumbwa na roorano yeMonk inopedzisa Noir's noir novel, uyo akapinda mune mamwe marudzi zvakare.
Musiyano wekirasi, kudanana kwepamusoro, chikamu chechipiri chevakadzi mune imwe yenguva dzakakurumbira munhoroondo yeEngland, tsvina uye hurombo hwakaumba London zvimwe zvekare, ivo vanogadzira yakasarudzika marongero eatikitivha ayo Anne Perry anoshandisa ne sagacity uye tarenda.
1 Juliet Hulme, akabatwa nemhosva yekuponda.
2 Juliet Hulme anova Anne Perry.
3 Anne Perry, hupenyu husina nzvimbo yekukanganwa.
Juliet Hulme, akabatwa nemhosva yekuponda.
Na chete 16 makore, apo mhuri yeHulme yaigara muNew Zealand nekuda kwebasa rababa vaJuliet, rector weYunivhesiti yeCanterbury, Juliet neshamwari yake Pauline vakauraya amai vekupedzisira, Honora Rieper, kumubatsira 45 inorova nedombo. Mushure memakore mashanu mutirongo, mutongi weNew Zealand akavasunungura pamamiriro ezvinhu ekuti Juliet naPauline vasazonyore zvakare.
Pakutongwa iyo ungochani hukama izvo zvavaichengeta Juliet naPauline uye zvirongwa zvavo zvekuenda kuUnited States kunotsikisa zvinyorwa zvitsva zvavaifarira kunyora pamusoro penyika dzekufungidzira. Zvirongwa zvevabereki vaJuliet zvekuenda kuSouth Africa uye kushora kwemhuri kuna Pauline achiperekedzwa naye zvakaonekwa sekukonzeresa chirongwa chekuuraya amai vaPauline.
Makore mashanu mushure mekutongwa uye shure kwake isa muRusunungukoJuliet akabva kuNew Zealand, akatanga kushanda semushandi wekubhururuka uye, mushure mekugara munzvimbo dzakasiyana, akatamira kuScotland naamai vake nemurume wake.
Juliet Hulme anova Anne Perry.
Asati atamira naamai vake kuScotland, Juliet akachinja zita rake kunzi Anne Perry, akapedza mwaka mu United States kupi akapinda Chechi yeMormon, chinamato chaachakazvipira, uye akatanga kunyora. Vaifanira kupfuura Makumi maviri emakore kuti aone yake yekutanga novel yakaburitswa, Iyo Carter Street Mhosva, kubva pane akateedzana naThomas Pitt.
«Ndinoda dzidziso yake ine kudzidza, nguva dzose, uye musina munhu anosarudzika. Hapana munhu anorangwa »anodaro Anne Perry nezve dzidziso yeMormon.
Victorian London, chiitiko chevaviri vanopara mhosva sagas yakanyorwa naAnn Perry.
Anne Perry, hupenyu husina nzvimbo yekukanganwa.
Nyaya yake yakatungamira kune a yakanzi movie Zvisikwa zvekudenga nyeredzi mukati 1994 nekutarisa Melanie Kynskey saPauline uye Kate Winslet muJuliet Hulme (Anne Perry), akahwina iyo Sirivha Shumba gore rimwe chetero kuVenice International Film Festival.
Iyi firimu yakapfurwa pasina mvumo yake uye yakatungamira mukudonha mukutengesa kwemabhuku ake pasirese.
Kururamisa mhosva nekuda kwemushonga wekuyedza waaitora kurapa chirwere chetibhii, kusvika pakuyaruka, kuchinjiso kwake kwekugara uye kurambana kwevabereki vake, Anne Perry apedza makore abva kuburitswa firimu achibvunza nyika kuti ikanganwe zviito zvake.
Anne Perry achiri kushanda pazera ramakore makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe, rake rekupedzisira bhuku, rakaburitswa mu2018: Kutsiva paThames, kubva pane akateedzana naWilliam naHester Monk.
Yekurangarira ndangariro chaive chirango chake, zvakanyanyisa kunonoka kuzadzikisa kukanganwa kwaaishuvira kwazvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Anne Perry: Kubva pamhosva yemhondi kuenda kumunyori wemhosva.
2. Uye imwe ye "yakaipa" (kana isiriyo) mapurisa nemapurisa